FAQs - Chengdu Hemeikaineng Medical Equipment Co., Ltd.
Household Medical Appliance
Mitambo, Kumba & Kudzoreredzwa Kwechipatara
Ehe, isu tinoda kuti maodha ese epasi rese ave neinoenderera diki odha huwandu. Kana iwe uri kutsvaga kutengesa asi muhuwandu hudiki, tinokurudzira kuti utarise webhusaiti yedu
Hongu, tinogona kupa zvinyorwa zvakawanda zvinosanganisira Zvitupa zveAnalysis / Conformance; Inishuwarenzi; Origin, uye mamwe magwaro ekutumira kunze pazvinodiwa.
Unogona kubhadhara kubhengi account yedu, T/T, Western Union kana PayPal:
Isu tinopa waranti zvinhu zvedu uye magadzirirwo. Kuzvipira kwedu ndiko kugutsikana kwako nezvigadzirwa zvedu. Mune waranti kana kwete, itsika yekambani yedu kugadzirisa nekugadzirisa nyaya dzese dzevatengi kuti munhu wese agutsikane.
Ehe, isu tinogara tichishandisa emhando yepamusoro ekunze kurongedza. Isu tinoshandisawo yakasarudzika njodzi yekurongedza kune zvinhu zvine njodzi uye yakatenderwa inotonhora yekuchengetedza inotakura kune tembiricha zvinhu. Nyanzvi kurongedza uye zvisiri-yakajairwa kurongedza zvinodiwa zvinogona kuunza imwe mari.
Mutengo wekutumira unoenderana nenzira yaunosarudza kuwana zvinhu. Express ndiyo nzira inokurumidza asi zvakare inodhura zvakanyanya. By seafreight ndiyo yakanakisa mhinduro kune yakakura mari. Chaiyo mitengo yekutakura tinogona kukupa chete kana tichiziva ruzivo rwehuwandu, huremu uye nzira. Ndapota taura nesu kuti uwane rumwe ruzivo.
Kero:Nhamba 811, 8th floor, kuvaka 1, No. 5 Jialing Road, Wuhou District, Chengdu